အမှောင်ကြိုက်သူများ – Grab Love Story
ကုမ္ပဏီကြီးဖွင့်လိုက်တာဟာ သန်းသန်းစိုးတို့လင်မယားအတွက်လားဟုပင်ထင်ရသည်။ သန်းသန်းစိုးနှင့် စိုးမောင်တို့ကား အစက ဒီနေရာလေးမှာတိုက်ခန်းကျဉ်းလေးမှာ လခပေးပြီးငှားနေကြသည်။ အစက ကြုံရာကျပန်းလုပ်စားနေသော သန်းသန်းစိုးတို့လင်မယားအတွက် ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ပင်.. ။စိုးမောင်က ကုမ္ပဏီမှာဒရိုင်ဘာဝန်ထမ်းလုပ်သည်။သန်းသန်းစိုးက အစက ကုမ္ပဏီမှ ၀န်ထမ်းတွေကို မနက်ပိုင်း ထမင်းသုတ် ထမင်းပေါင်းများရောင်းချပေးသည်။ ကံကောင်းချင်တော့ သန်းသန်းစိုးကံစမ်းလိုက်တော့ထီက ဆုကြီးထပေါက်ပြီး ထမင်းဆိုင်ကြီးကြီးမားမားဖွင့်နိုင်သွားသည်။ လင်မယား(၂)ယောက်ကား လောဘဖြင့် ငွေရှာကောင်းသူများဖြစ်ကြသည်။အသက်ကလည်း(၃၀)ကျော်ကျော်လောက်သာရှိကြသေးတာကိုး။ စိုးမောင်ကလည်းကုမ္ပဏီမှာ ၀င်လုပ်တော့ အပေါင်းအသင်းကရလာပြီး အဆက်အစပ်များရှိလာသည်။ ကားပွဲစားလုပ်ကြည့်သည်.။ ကံစပ်သည်ဘဲပြောရမည်လား ရန်ကုန်ကားပွဲစားလောကမှာစိုးမောင်ဆိုလျှင်မသိသူ မရှိလောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီး အောင်မြင်သွားသည်။
ဒီတော့ ကုမ္ပဏီကထွက်ပြီးကားပွဲစားအလုပ်ကိုဇောက်ချလုပ်တော့သည်။ သန်းသန်းစိုးဖွင့်ထားသောဆိုင်ကလည်းအောင်မြင်သည်။ အလုပ်သမားတွေပင် ငှားထားရသည်။ သူမရွာမှ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတော်သူ ကောင်လေး/ကောင်မလေးများကိုခေါ်တော့ စိတ်ချရသည်။ စိုးမောင်ကလည်း စီးပွားရေးအရအောင်မြင်လာတော့ ဘီယာလေးတစ်မြမြနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကားလေးလဲရှိနေပြီကိုး။တစ်ခါတစ်ရံ အပေါင်းအသင်းများနှင့်ဆုံလျှင်ညအိမ်ပြန်မအိပ်သည်များပင်ရှိလာသည်။ ငွေကလည်း တလဟောဝင်တော့ အပျော်အပါးလေးဖက်လာသည့်သဘော။ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်ထားသော်လည်း တစ်ခါတစ်လေမှသာ သွားကြည့်ဖြစ်သည်။ သန်းသန်းစိုးကလည်း ဆိုင်မှာလက်မလည်အောင်ရောင်းရတော့ ဆိုင်နောက်ဖက်ကကန့်ထားသော အခန်းမှာဘဲအိပ်ဖြစ်သည်။ဆိုင်မှာက အခန်း(၃)ခန်းရှိသည်။ ရွာမှ သူမခေါ်ထားသော ကောင်မလေး(၂)ယောက်နေသည့်အခန်းက(၁)ခန်း။ သူမကတစ်ခန်း။ တစ်ခန်းက ဆိုင်က စားပွဲထိုးကောင်လေး မောင်တင့်နေသည်။ မောင်တင့်ကားဖင်ပေါ့သည်။ ဘာခိုင်းခိုင်းရသည်။ အသက်က (၂၅)နှစ်ခန့်ရှိပြီ. ကိုစိုးမောင်တို့ရွာမှဖြစ်သည်။
အမ.. ဟိုကဆရာတို့ဝိုင်းက ၂၀၀၀ အမ်းရမယ်။ မောင်တင့်က ကောင်တာမှာထိုင်နေသော မသန်းသန်းစိုးလက်ထဲသို့ ၁၀၀၀ တန်ကို အပ်လိုက်ရင်း ဆိုင်နောက်ဖက်တွင် ဆေးကြောနေသော အဒေါ်ကြီးဆီသို့ပန်းကန်ခွက်ယောက်များကိုသွားပို့လိုက်သည်။စိုးမောင်ကား ဆိုင်ရှေ့သို့ပြန်ထွက်လာပြီး…မသန်းသန်းစိုးပေးလိုက်သော တစ်ထောင်တန်(၂)ရွက်ကိုယူကာ စားသောက်ဝိုင်းဆီသို့ပြန်သွားပြီး အမ်းလိုက်သည်။ မောင်လေးရေ…ညနေပိုင်းရောင်းဖို့ နည်းနည်းနေရင်ဈေးသွားဝယ်ကြဦးစို့။ ပစ္စည်းတွေကနည်းနေပြီ။ ဟုတ်..အမ…မောင်တင့်ကား လမ်းထိပ်က တက္ကစီဂိတ်မှာ ကားတစ်စီးသွားငှားခဲ့သည်။၀ယ်ရမည့် ပစ္စည်းကလည်းများတယ်လေ။ မသန်းသန်းစိုးက ဆိုင်နောက်ခန်းသို့ဝင်ကာ အ၀တ်အစားလဲနေဟန်တူသည်။ မကြာမီတော့ အ၀တ်အစား သစ်သစ်လွင်လွင်ဖြင့်မသန်းသန်းစိုးထွက်လာသည်။
မောင်တင့်ကား ဈေးခြင်းတောင်းကြီးကိုင်ကာ စောင့်နေသည်။ ကဲ..သွားစို့…မောင်လေး ဒီအချိန်ကား လူပါးသောအချိန်ဖြစ်သဖြင့် ဆိုင်ကိုကောင်မလေးတွေနဲ့လွဲထားလို့ရသောကြောင့် သန်းသန်းစိုးတစ်ယောက်စိတ်ချလက်ချဈေးသွားနိုင်သည်။ ကားပေါ်တက်ပြီး လမ်းတစ်ဝက်လောက်တွင်…သန်းသန်းစိုးပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှဖုန်းကမည်လာသည်။ ယောင်္ကျားဖြစ်သူကိုစိုးမောင်ဖုန်း။ပြော.ယောင်္ကျား…. မိန်းမ ဒီနေ့ကိုယ်အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ ပြန်မလာတော့ဘူး..သန်လျင်ဘက်မှာညအိမ်မယ်။ အင်း..ပါ….အလုပ်ရှိတာဘဲ….ရတယ်..ရတယ်။ သန်းသန်းစိုးက ပြောပြီးဖုန်းကိုချလိုက်သည်။ ပြောရလျှင်တော့ လင်မယားနှစ်ယောက်ကား ငွေနောက်ဘဲလိုက်နေသဖြင့် အတူတူတောင် တစ်ခါတစ်ရံမှ အိပ်ဖြစ်ကြသည်။ဒါလဲကိုစိုးမောင်က လည်းအပြင်မှပင်ပန်းလာ ဆိုင်မှာလည်းသူမကပင်ပန်း ဆိုသည့်နေ့နှင့်ကြုံလျှင် လင်ခန်းမယားခန်းပင် မရောက်လိုက်။ ပြီးတော့ အိမ်ထောင်သက်(၇)နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့လည်း အရင်လို အာရုံမရတော့တာလဲပါမည်.။ ဈေးသို့ရောက်တော့ သန်းသန်းစိုးက မောင်တင့်ကိုခေါ်ပြီး သူမ၀ယ်စရာရှိတာများပင်ဝယ်ကြသည်..မောင်တင့်ကလူကောင်ကလည်း ထွားတော့ လင်မယားဟု ဈေးထဲမှထင်ကြသည်။
စိုးမောင်နှင့်ကလည်းဈေးတစ်ခါမှမလာဘူးဘဲ မောင်တင့်နှင့်သာဈေးလာသဖြင့် မောင်တင့်ကိုသူမလင်ဟုထင်နေကြတာမဆန်း။ ဟား..လွတ်လပ်ရေးရပြီကွ… စိုးမောင်က ဘီယာခွက်ကို မြောက်ရင်း သူ့ဘော်ဒါ အောင်မောင်းလက်ထဲမှ ခွက်နှင့်တေ့လိုက်ပြီး ချီးယားစ်..ဟုပါးစပ်မှ ပြောလိုက်သေးသည်။ဒီနေ့စိုးမောင်တစ်ယောက်မအူမလည်တောသားသူဌေးတစ်ယောက်ကို အချဉ်ဖမ်းပြီး ပွပေါက်တိုးလာသည်။ လောကကြီးကလည်သူစားစတမ်းပင်…။ ကိုစိုးမောင်တို့ကတော့ ပိုင်တယ်ဗျာ…..ကျွန်တော်သာဆိုဒီလိုလုပ်ရဲမယ်မထင်ဘူး။ ဒါကတော့ လောကကြီးမှာ ညံ့သူခံစတမ်းဘဲလေဗျာ..။အောင်မောင်းတစ်ယောက်စိုးမောင်ကိုအားကျနေသည်။ စိုးမောင်က မိန်းမကိုလည်းပိုင်သည်… ဒီနေ့လည်းဖုန်းဆက်ပြီး သူ့မိန်းမသန်းသန်းစိုးကို သံလျှင်ဘက်မှာအလုပ်ရှိလို့ညအိပ်မည်တဲ့။ တကယ်တော့ စိုးမောင်က သူ့ကိုခေါ်ပြီးပဲခူးရောက်နေတာ။ စိုးမောင်ကအောင်မြင်လာတော့ အစုံလုပ်လာသည်။
ပဲခူးမှာ ဆော်အငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိသည်။ ရိုစီခင်တဲ့…နုသည်ရွသည်…. စိုးမောင်က ကြေးမျိုးမျိုးမျက်မျက်ရလာတိုင်းရိုစီခင်ထံလာလာထောက်ပံ့နေကြ။ ကောင်မလေးကအကုန်းလည်းရက်စက်သည်။ စိုးမောင်ကတော့ အိမ်ကမိန်းမကြီးနဲ့တခြားစီဟု အောင်မောင်းကိုပြောတတ်သေးသည်။အောင်မောင်းကလည်း ဒီမှာမယားငယ်ရှိသည်။ ရန်ကုန်မှာရှိနေသာမိန်းမမသိအောင်ဒီမှာလာကဲကြခြင်းဖြစ်သည်။ ပြောရလျှင်တော့ အိမ်ကဟာမကြီးတွေက အမြဲတမ်းစားနေရလို့လားမသိ။ ရိုးအီလာတာလဲပါသည်။ ကိုယ့်မိန်းမကလွှဲလျှင်တလောကလုံးက မိန်းမတွေကလှနေကြသည်။ ကဲ…ဘော်ဒါ…သောက်ပြီးစားပြီးရင် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားကြေးနော်….။ဟားး….ခင်ဗျာလိုက်ပါဆိုရင်တောင်မှ မလိုက်ဘူးကိုစိုးမောင်ရေ… မနက်ပြန်ခါနီးကျမှ ကျွန်တော်သွားနေကျအိမ်မှာလာခေါ်လိုက်… ခုတော့ပို့ပေးထားခဲ့…ကျွန်တော့ အသည်းလေးအိမ်ကို…ဟက်ဟက်.။ အောင်မောင်းလည်းတော်တော်မူးနေပြီ။
တကယ်တော့ စိုးမောင်နှင့်အောင်မောင်းကား ၀ါသနာတူစရိုက်တူမို့ အလွန့်အလွန်ကိုတွဲမိကြသည်။ ကိုစိုးမောင်လည်း အောင်မောင်းကို သူ့မယားငယ်အိမ်ပို့ထားခဲ့ပြီး သူဝယ်ပေးထားသော ရိုစီခင်ရှိရာ အိမ်သို့ကားကို ဦးတည်ပြီးမောင်းခဲ့တော့သည်။ရိုစီခင်ရေ..ဒီညတော့..ဟင်းဟင်း… စိုးမောင်စိတ်ထဲမှကြုံးဝါးလိုက်သည်… သူ့လီးကြီးကလည်း ရိုစီခင်ကိုမြင်ယောင်ရင်း ထောင်ထနေပြီလေ။ အား…ကောင်းလိုက်တာ…ခလေးရယ်။ စိုးမောင်ကားး ခါးကြီးကိုကော့သွားသည်…. ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်နေသော စိုးမောင်လီးကို ရိုစီခင်စိတ်ပါလက်ပါစုပ်ပေးနေသည်။စိုးမောင်လီးထိပ်ကြီးကို သူမလျှာဖြင့် ကစားလိုက်တိုင်းစိုးမောင်တွန့်တွန့်လူးနေသည်။ ပြွတ်ပြွတ် လီးချောင်းကြီးကို အာခေါင်ထဲထိတစ်ဆုံးငုံလိုက်ပြီး အားရပါးရလွေတော့ စိုးမောင်က တဟင်းဟင်းတဟဲဟဲနဲ့။
ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ခြူစားလာတာရိုစီခင်ကအံတိုနေပြီလေ။ ရိုစီခင်က လီးစုပ်ပေးခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီး…. ကိုကြီးဟာကြီးကမာနေပြီ….ခစ်ခစ်… စိုးမောင်က တဟီးဟီးနှင့်…. ရိုစီခင် အိပ်ယာပေါ်မှာ လေးဖက်ထောက်ပြီး….ဖင်ကုန်းပေးလိုက်ချိန်တွင် စိုးမောင်ကလည်း ပက်လက်လှန်နေရာမှထပြီးရိုစီခင်နောက်မှာ နေရာယူထားပြီးဖြစ်သည်။ ရိုစီခင်ကုန်းချက်ကရက်စက်လှသည်။ ဖွေးအုနေသောတင်ပါးများကိုကော့ထားပေးပုံကစိုးမောင်စိတ်ကိုပိုမိုကြွစေသည်။ သူ့လီးကို ရိုစီခင်အဖုတ်မှာတေ့ပြီး ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်… အို…ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲကိုကြီး..ရိုစီခံချင်လှပါပြီဆို..ဟင့် ရိုစီခင်ရဲ့ညုတုတုအသံလေးက စိုးမောင်စိတ်ကို လွတ်သွားစေပြီ။ ရိုစီခင်ရဲ့ခါးကို ကိုင်ပြီး.စိုးမောင်နောက်မှအသားကုန်လိုးတော့သည်။ ဒုတ်ဒုတ်…ဘတ်..ဘတ်…အအ… သေ..သေပါပြီ..ရိုစီခင်ကား အော်ညဉ်းတော့သည်။ သို့သော်ခဏပါ စိုးမောင်ရဲ့အဆက်မပြတ်ဆောင့်ချက်များနှင့်အတူ… ရိုစီခင်ကလည်း အစွမ်းကုန်ကို ဖင်ကိုထောင်ပေးထားသည်။ ဆောင့်ပါ..ကိုကြီး.ရဲ့..အအ.ရိုစီကောင်းနေပြီ… အဖုတ်ထဲဝင်ဝင်လာသော စိုးမောင်လီးကြီးကို ရိုစီခင်စောက်ပတ်အသားမျှင်များက ဆွဲဆွဲညှစ်ညှစ်ပေးတော့ စိုးမောင်လိုးရတာအရမ်းကောင်းနေသည်။
ရိုစီခင်ကလည်း ဒါမျိုးလုပ်ပေးလျှင်ယောင်္ကျားတွေ အရမ်းစွဲတာသိတယ်လေ။ စွပ်ဒုတ်…ဗျစ်..ဘွတ်..ဒုတ်..စွပ်..စွပ်..ဘောက်..ဘောက်..ပြွတ်ပြွတ်… အအ..ကိုကြီး..ဆောင့်ဆောင့်..ကျွတ်စ်ကျွတ်စ်…အား..အ ရိုစီခင်ရဲ့အော်သံနဲ့ စိုးမောင်ရဲ့တဟင်းဟင်းအသံများဆူညံနေသည်။ နှစ်ယောက်သားကားချွေးများပင်ရွဲလာသည်။ နောက်ထပ်အချက်(၅၀)လောက်လိုးလိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ စိုးမောင်ရဲ့လရေများကား ရိုစီခင် စောက်ပတ်နံရံများသို့ဖြန်းပက်သွားသလို ရိုစီခင်လည်း လီးကြီးကို အစွမ်းကုန်ဆွဲညှစ်လိုက်ကာ စိတ်လျှော့လိုက်တော့ စောက်ရေများထွက်ကျကုန်ပါတော့တယ်။ ဆိုင်ပိတ်ချိန်ရောက်ပြီ… သန်းသန်းစိုးက ငွေများကိုရေတွက်နေသည်… ဒီနေ့ဆိုင်ကလည်းလူကျသည် တော်တော်လဲရောင်းကောင်းသည်။
မောင်လေး…နည်းနည်းနေရင်ထမင်းစားရအောင်…။ ဆိုင်တံခါးတွေပိတ်လိုက်တော့…။ မောင်တင့်ကား ဆိုင်တံခါးတွေကိုလိုက်ပိတ်လိုက်သည်…။ သန်းသန်းစိုးကား ဆိုင်တံခါးများလိုက်ပိတ်နေသော မောင်တင့်နောက်ကျောကို ခိုးကြည့်လိုက်ပြီး ပြုံးလိုက်သည်။ မောင်တင့်ကိုသူမသဘောကျနေတာကြာပြီ။ လင်ဖြစ်သူစိုးမောင်က သူ့ကိုယ်သူလည်လှပြီထင်နေတာ။ပဲခူးမှာမယားငယ်ရှိနေမှန်းသူမသိပြီးသား။ ဒါပေမဲ့ သူမကမသိချင်ယောင်ဆောင်ထားပေးသည်။ သန်းသန်းစိုးကလည်းသူမအစီအစဉ်နှင့်သူမ။ မောင်တင့်က စိုးမောင်ထက်ငယ်လည်းငယ်သည်။ချောလည်းချောသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်းတောင့်သေးသည်။ သူမကလည်းစိုးမောင်ကိုစိတ်ကုန်နေတာနှင့်အတော်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း မနက်ဈေးဝယ်သွားတိုင်း ဆိုင်ကကောင်မလေးတွေမသိအောင် မုန့်ဖိုးပေးရတာနဲ့ အ၀တ်အစားခိုးဝယ်ပေးရတာနဲ့။ ဒီနေ့လို လင်ဖြစ်သူစိုးမောင်ပြန်မလာတဲ့နေ့မှာ သူမအကြိုက်ဖြစ်သွားသည်။ ဆိုင်မှ ဒေါ်အေးကလည်း အသက်သာကြီးသာရွသည်။ ငယ်စဉ်ကာလက ဖာလုပ်စားခဲ့ဖူးတော့ သန်းသန်းစိုးဘယ်ခွင်ကိုဆင်နေသည်ဆိုတာသိသည်။
သန်းသန်းစိုးကိုမြောက်ပေးသည်…. သန်းသန်းစိုးရယ်…နင့်အရွယ်နဲ့နင့်ရုပ်ရည်နဲ့… စိုးမောင်နဲ့တန်ကိုမတန်ပါဘူး.။ နင့်အရွယ်နဲ့ဆို မောင်တင့်လိုလူပျိုလေးကိုတောင်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုတာမျိုး။ သန်းသန်းစိုးဒီလိုစကားတွေမှာသာယာနေမှန်းသိတော့ ဒေါ်အေးကိုအရမ်းပေါင်းသည်။ ဒါကြောင့် သန်းသန်းစိုးက ဒေါ်အေးကို ငွေတွေချေးပေး။ မုန့်ဖိုးတွေခဏခဏပေးသည်။ ဒီနေ့စိုးမောင်ပြန်မလာမှန်းသိတော့…ဒေါ်အေးကသန်းသန်းစိုးမပြောခင်ကတည်းက ဆိုင်ကကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကို သူမတို့ရပ်ကွက်ထဲ ညအိပ်အလည်ခေါ်သွားသည်။ သန်းသန်းစိုးကလည်း ဒေါ်အေးကို ဘောက်ဆူးများများပေးလိုက်သည်။ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကလည်း ဒေါ်အေးသဘောရိုးဖြင့်အလည်ခေါ်သည်ထင်ပြီး လိုက်သွားကြတယ်။
ဒေါ်အေးကတော့ သန်းသန်းစိုးတစ်ယောက် ဒီညမောင်တင့်ကို ပညာကုန်သုံးပြီး မြူဆွယ်တော့မယ်ဆိုတာသိနေပြီ။ မောင်တင့်ကား ဆိုင်တံခါးများကို ပိတ်လိုက်ပြီး မသန်းသန်းစိုးဆီပြန်လျှောက်လာသည်။ မသန်းသန်းစိုးကထမင်းဝိုင်းပြင်ထားသည်။ မောင်လေးညစာစားရအောင်လေ။မသန်းသန်းစိုးရှေ့မှာ သူဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ဟင်းတွေထည့်စားနော်မောင်လေး…အမနဲ့မင်းနဲ့နှစ်ယောက်ထဲရှိတာ… မသန်းသန်းစိုးက ထမင်းပန်းကန်ထဲ.ဟင်းတွေခူးခပ်ပေးတော့ မောင်တင့်ရင်ထဲဒိန်းခနဲဖြစ်သွားသည်…. မသန်းသန်းစိုးကား လည်ဟိုက်အကျီကိုဝတ်ထားတာကြောင့်… ဟိုက်နေသော အကျီအောက်မှ ရင်နှစ်မွာကိုသူကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နေရသည်။အအိုလို့သာဆိုသည် နို့တွေကတင်းနေသည်။ ကြီးလည်းကြီးလှသည်။ ထမင်းငုံ့စားနေသောသန်းသန်းစိုးက တမင်သက်သက်ကို မောင်တင့်မြင်အောင် ပြနေသည်။ သူမထမင်းစားနေစဉ် မောင်တင့်ထမင်းပင်သိပ်မစားနိုင်ဘဲ သူမနို့ကို ခိုးခိုးကြည့်နေတာကိုမသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးထားသည်။
ရုတ်တရက် သူမခေါင်းမော့ကြည့်တော့ မောင်တင့်ကပျာကယာခေါင်းငုံ့သွားသည်။ မောင်တင့်… ဗျာ…အမ…မောင်တင့်အသံနည်းနည်းတုန်နေသည်.။ သန်းသန်းစိုးရီချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားရသည်။ ဒီရပ်ကွက်ထဲကလူတွေက အကျင့်မကောင်းဘူး..သိလား။ ဘာ..ဘာဖြစ်လို့လဲ…အမ…။ နင့်အကိုက ခဏခဏခရီးထွက်တယ်မဟုတ်လား….။ဟုတ်..ဟုတ်အမ.. အဲ့ဒါကို နင့်အကိုမရှိရင် နင်နဲ့ငါနဲ့ခိုးအိပ်နေတယ်ဆိုပြီး သမုတ်ကျတာလေ။ ဟာ ဗျာ…အမကလည်း..မဟုတ်တာဘဲ…ဒီလူတွေတော်တော်ဆိုးတာဘဲ… ဟုတ်ပါ့…ဒါနဲ့ငါလဲ ဒီလူတွေသိအောင်ပြောထားခဲ့တယ်..သိလား..မောင်တင့် ရွဲ့ပြီးတော့ကို…. ဟုတ်တယ်လို့….မောင်တင့်နဲ့အမနဲ့ရနေတာကြာပြီလို့…။
စိုးမောင်ခရီးထွက်တိုင်း မိုးလင်းပေါက်ကိုကုန်းတာလို့…။ ဟာဗျာ.. .မောင်တင့်မျက်နှာကတော့ရဲတွတ်သွားသည်… သူ့ရင်တွေပင်တဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေတာမရပ်တော့သလို.. ပုဆိုးအောက်မှလီးကလည်း ချက်ချင်းကိုမာတောင်လာသည်…။မသန်းသန်းစိုး မျက်နှာကိုပင်မကြည့်ရဲတော့။ အိုက်လိုက်တာမောင်တင့်ရယ်…နွေရာသီမို့ထင်တယ် သန်းသန်းစိုးကား ဘော်လီအကျီလေးနှင့်..။ မောင်တင့်ကား သူမနှင့်စိုးမောင်အိပ်သောကုတင်ပေါ်မှာ မှောက်ခုံမှောက်နေသော သန်းသန်းစိုးရဲ့ကိုယ်လုံးကိုနှိပ်ပေးနေရသည်။ကိုယ်လက်တွေကိုက်သည်ဟုဆိုကာ သန်းသန်းစိုးက မောင်တင့်ကိုနှိပ်ခိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဟင်း..ပေါင်ကလျဲေချွးတွေထွက်လိုက်တာ… မောင်နှမချင်းဘဲ…ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး….မောင်တင့်…ခစ်ခစ်။ သန်းသန်းစိုးက ထမိန်ကိုလျှောချွတ်ကာ ကုတင်အောက်ဖက်သို့တွန်းပို့လိုက်သည်။ သူမကပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး အမပေါင်တွေကိုနှိပ်ပေးစမ်းမောင်တင့်ဟုပြောကာ မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်သည်။
မောင်တင့်ကား ပင်တီနှင့် ဘော်လီသာကျန်တော့သော မသန်းသန်းစိုးရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုကြည့်ရင်း စိတ်တွေဖောက်ပြန်လာသည်။ ကိုစိုးမောင်ကလည်း ခရီးထွက်နေတော့ မသန်းသန်းစိုးဆာနေမှဘဲလို့သူတွေးမိသည်။ မသန်းသန်းစိုးရဲ့ပေါင်တံတွေကိုတုန်ယင်စွာဖြင့်နှိပ်ရင်း မသန်းသန်းစိုး ပင်တီအပန်းရောင်လေးပေါ်မှ ရေးတေးတေးမြင်နေရသော အကွဲကြောင်းပြူပြူလေးကို ကြည့်ရင်းတံတွေးတနင်နင်ဖြစ်နေသည်။အင်း..ပေါင်ရင်းနားကို တိုးနှိပ်ပေးစမ်းမောင်တင့်…။ မောင်တင့်ကား ပေါင်ရင်းနားကို တိုးနှိပ်ရင်းတိုးနှိပ်ရင်းဖြင့်။ အို…. ကုတင်ပေါ်မှသန်းသန်းစိုးက လူးလဲထပြီး.. မောင်တင့်ပါးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်ချလိုက်သည်… ဖြန်း….ဟင်…သားရေပေါ်အိပ်သားရေနားစား….။ မောင်တင့်ကား ခေါင်းကြီးငုံ့နေသည်…. နင်…နင်မိုက်ရိုင်းလှချည်လား…..။
ကျွန်တော်…ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်…အမ… မောင်တင့်ကား မသန်းသန်းစိုးကို နှိပ်ပေးရင်းစိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ပါးကိုကုန်းနမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်…ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်…အမ… ဒီလိုတောင်းပန်လို့ရလား…ပြောစမ်းမောင်တင့်…. ငါ့မှာတော့နင့်ကို လူရိုးလူကောင်းလေးဆိုပြီး ကိုယ့်မောင်လေးလို သဘောထားလိုက်ရတာ…. သန်းသန်းစိုးက ပါးကို တဖြန်းဖြန်းရိုက်ရင်း မေးနေသည်။ အမ…အမ..ကြိုက်တဲ့အပြစ်ပေးပါ…အမ….။အအ…ကိုကြီးရေ… နာ..နာတယ်…ရိုစီခင်အော်သွားသည်….. စိုးမောင်က ရိုစီခင်ခရေကိုခြွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုစီခင်ရဲ့ ဖင်ဝကား ခေါင်းလိမ်းဆီများဖြင့်စိုစွတ်နေသလို… စိုးမောင်ရဲ့အကြောတပြိုင်းပြိုင်းထနေသော လီးတံကြီးကလဲ ဆီတွေသုတ်လိမ်းထားသဖြင့် ပြောင်လက်နေသည်…. ခဏလေးပါ…ခလေးရယ်…မကြာပါဘူး….
နောက်ဆိုကြိုက်သွားမှာပါ…. စိုးမောင်က ရိုစီခင်ရဲ့ဖင်ထဲကိုလီးကိုချော့သွင်းနေသည်။. စောက်ဖုတ်ကိုလိုးရတာထက် ကျပ်လည်းကျပ် ညှစ်အားကလည်းပိုသဖြင့် စိုးမောင်အကောင်းကြီးကောင်းနေသည်..။ လီးတစ်ချောင်းလုံးက ရိုစီခင်ရဲ့ဖင်ပေါက်လေးထဲကိုတစ်ရစ်ရစ်နဲ့မြုတ်ဝင်သွားသည်။ပြီးတာနဲ့ ဖြေးဖြေးချင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်ကာဆောင့်တော့သည်။ အအ…ရိုစီခင်ကား အစပိုင်းတွင် အနည်းငယ်နာသော်လည်း…. တဖြည်းဖြည်းချင်းနှင့် စိုးမောင်ဖင်လိုးတာကိုကြိုက်လာသည်…။ အင်းအင်း..သူမစောက်ပတ်မှ အရည်ကြည်လေးများပင်ထွက်လာသည်။
စိုးမောင်ကလည်းဖင်လိုးရင်းနဲ့ တစ်ဖက်ကခါးကိုကိုင် ရိုစီခင်ရဲ့စောက်စိလေးကို သေသေချာချာကိုပွတ်ပေးနေသည်။ ရိုစီခင်ကား ကော့ကော့ပြီးတက်လာသည်။ စိုးမောင်ကလည်း ရိုစီခင် ကောင်းနေပြီမှန်းသိသဖြင့်သွက်သွက်လေးဆောင့်တော့သည်။ ရိုစီခင်ရဲ့ စွင့်ကားနေသော ဖင်နှစ်လုံးကား စိုးမောင်ဆောင့်ချလိုက်တိုင်း အသားလေးတွေတုန်တုန်သွားတာကိုက စိုးမောင်အဖို့ပိုပြီးအရသာတွေ့စေသည်။အင်း..ဟင်း..ကိုကြီး..ဆောင့်ဆောင့်..ရိုစီခံနိုင်ပြီ… အိမ်ကမိန်းမသန်းသန်းစိုးကို ဖင်လိုးမည်ဆိုတိုင်းဘယ်တော့မှလက်မခံနိုင်ခဲ့။ ယခု ရိုစီခင်နဲ့ကျမှ ဖင်လိုးပါခံသဖြင့်စိုးမောင်ရိုစီခင်ကိုတော်တော်စွဲသွားသည်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စိုးမောင်လီးချောင်းကြီးက ကျင်ကျင်လာသည်။ ရိုစီခင်ရဲ့ ညဉ်းတွားသံတွေကလည်းစိုးမောင်စိတ်ကိုပိုဆွနေသည်။ တဘွတ်ဘွတ် တဘတ်ဘတ်နဲ့ စိုးမောင်လဥနဲ့ ရိုစီခင်ဖင်ရိုက်ခတ်သံတွေ မြန်ဆန်လာပြီး စိုးမောင်မျက်နှာကြီးရှုံ့သွားကာ တအင်းအင်းတအဲအဲနဲ့ စိုးမောင်..ရိုစီခင်ဖင်ထဲကိုသုတ်ရည်တွေပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။ ဖင်ထဲကနေစိုးမောင်လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်နှင့်ရိုစီခင်လဲ မွေ့ယာပေါ်ကိုမောမောပန်းပန်းနှင့်မှောက်ခုံကျသွားလေသည်။ သူမဖင်မှာတော့ စိုးမောင်ပန်းထုတ်ထားတဲ့ သုတ်ရေတွေကပေပွနေပါတယ်။ တူ.တူ..စိုးမောင်ဖုန်းကိုထပ်မံခေါ်လိုက်သည်။
ပထမတစ်ခေါက်က မကိုင်။ ဒုတိယတစ်ခေါက်ခေါ်တော့မှ ဟဲလို.ယောင်္ကျား…ပြော.ဆိုသော သန်းသန်းစိုး၏ အသံကိုကြားရသည်။ မိန်းမရေ…ကိုယ့်အလုပ်က မပြတ်သေးဘူးကွာ… အဲ့ဒါ….မနက်ဖြန်ကုိုယ်ပြန်မလာသေးဘူး….။အင်းပါ..ယောင်္ကျားရယ်…. အလုပ်ကိစ္စနဲ့ဘဲ…အဆင်ပြေအောင်သာလုပ်ခဲ့…။ စိုးမောင်ကား ဖုန်းပြောရင်းနဲ့ဝမ်းသာသောစိတ်ကို မနည်းအောင့်ထားရသည်။ သန်းသန်းစိုးက သူပြောသမျှအဟုတ်ထင်နေသည်။ တကယ်တော့ သူရိုစီခင်နဲ့ မနက်ဖြန်ထပ်ကဲမလို့ပင်…။ အောင်မောင်းကလဲ မနက်ဖြန်မပြန်ချင်သေးလို့ပြောနေတာကိုး…။
အောင်မောင်းကလည်းသူ့လိုပင် သူ့မိန်းမကိုလှည့်ပတ်ပြီး ပြောနေမှာသေချာသည်။ ကုတင်ပေါ်မှ ရိုစီခင်ကသူ့ကိုမျက်စပစ်လှပြီ။ သူ့လိင်တံကြီးက ထပ်မံတင်းမာလာပြန်ပြီလေ…။ ဒါပဲ…နော်မိန်းမကိုယ်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်…. အင်း..အာဘွား…ချစ်တယ်ယောင်္ကျားရေ….. သြော်…ဒါနဲ့မိန်းမအခုဘာလုပ်နေလဲ…. မိန်းမလား….အိပ်တောင်ပျော်နေပြီ….ယောင်္ကျားကိုအိမ်မက်မက်နေတုန်းနိုးလာတာ။ဟား..မိန်းမကတော့ နောက်ပြီကွာ…. ဒါကြောင့် ချစ်တာ..သိလား..မိန်းမ..အာဘွား… စိုးမောင်က ဖုန်းကိုချလိုက်သည်။ ရိုစီခင်အိပ်နေသော ကုတင်ပေါ်သို့ သွားပြီး..ရိုစီခင်ကိုဖက်ကာ နမ်းရှုပ်လိုက်သည်။ သွားပါ…လူဆိုးကြီး…. ခုနက သူ့မယားနဲ့ကျတော့ သာယာနေလိုက်တာ…. မဟုတ်ပါဘူး.ရိုစီရယ်…ဒီမိန်းမကြီး.ခေါက်ထားလိုက်စမ်းပါ… နောက်ဆို…အဲ့ကောင်မကြီးကွာပစ်မှာ…သိလား… ဟင်း…ဒီလိုဘဲပြောတာဘဲ… မဟုတ်ပါဘူး…ကိုကြီးကရိုစီလေးကိုဘဲချစ်တာ..ဟက်ဟက်။
အို…သူတော်တော်ဆိုး… ရိုစီရဲ့ ပေါင်ခွကြားကို စိုးမောင်ရဲ့လက်ကြီးကလှမ်းနှိုက်လိုက်တာကိုး.. တဟီးဟီး..တခစ်ခစ်…တဏှာရမ္မက်လွှမ်းသံနဲ့ ညုသံများက အခန်းထဲမှာ ပျံ့လွင့်လာလေတော့သည်။ တလောကလုံးမှာ နှစ်ယောက်ထဲရှိနေသည့် အတိုင်းဟုပင်ထင်ရသည်။ သန်းသန်းစိုးက ဖုန်းကိုချလိုက်သည်။ စိုးမောင်ဖုန်းက ဇာတ်လမ်းကောင်းနေပြီဆိုမှဝင်လာသည်။ဖုန်းပြောနေသည့် အချိန်မှာ သူမကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေတာကို.စိုးမောင်သိလျှင် ဘယ်လောက်တောင်ရင်နာလိုက်မလဲမသိ….။ သူမကဖုန်းကိုပါဝါပါပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ တော်ကြာထပ်ဆက်လာနေဦးမည်။ ဖုန်းကို မှန်တင်ခုံပေါ်တင်လိုက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်လိုက်သည်။
ကုတင်ပေါ်မှာကတော့ မောင်တင့်ကား သူမကိုအသနားခံသောအကြည့်များဖြင့် မျက်ရည်လေးတွေဝိုင်းနေသည်။ မောင်တင့်တစ်ကိုယ်လုံးကား ကိုယ်လုံးတီးအနေအထားပင်။ ပါးစပ်ကို မအော်နိုင်အောင်အ၀တ်ဖြင့်ဆို့ပြီး တိပ်ဖြင့်ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၀ူးဝူးဝါးဝါးအသံတောင်မထွက်နိုင်။သန်းသန်းစိုးက မောင်တင့်ရဲ့ လက်တွေကိုကြိုးနဲု့စုံပူးချည်ပြီး ကုတင်ဘောင်မှာ ပူးပြီးတွဲချည်ပေးထားသည်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းကားယားအနေအထား ဖြင့်အောက်ဖက်ကုတင်တိုင်များမှာ ပူးချည်ပေးထားသည်။ ရမ္မက်ကြီးသော သန်းသန်းစိုးကား လူပျိုလေးမောင်တင့်ရဲ့ လူပျိုဘ၀ကို ကောင်းကောင်းကြီးစားသုံးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ။ သန်းသန်းစိုးပြုသမျှနုရမည့်ဘ၀ရောက်နေပြီ။
ထောင်မတ်နေသော မောင်တင့်လီးကိုကြည့်ရင်းသန်းသန်းစိုးက ဖိုက်ချင်လွန်းသဖြင့် စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များပင်စိမ့်ထွက်နေပြီ။ မောင်တင့်လေးကား ချည်ထားသောကြိုးများကို ရုန်းကြည့်နေသေးသည်။ ခစ်ခစ်…ရုန်းမနေနဲ့…မောင်လေး။ သန်းသန်းစိုးကား မောင်တင့်ပါးကို ကုန်းနမ်းရင်းပြောလိုက်သည်။ နောက်ဆို…မင်းကမမလင်ဖြစ်တော့မှာ.. စိုးမောင်ကို ကွာပြီး…နင့်ကိုယူမှာလေ..ငါက…။ သန်းသန်းစိုးကပြောရင်း မောင်တင့်ရဲ့ထောင်နေသောလီးကိုသူမလက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ရင်းဆွလိုက်သည်။ မောင်တင့်လီးကား သူမလက်ထဲတွင် တယမ်းယမ်းဖြင့် ငါးရံ့အရှင်တစ်ကောင်လိုပင်။ ခစ်ခစ်…လိုးချင်နေမှန်းသိတယ်လေ..။ ဘယ်လိုလဲ…ဒဏ်ပေးတာကြိုက်တယ်မဟုတ်လား….။
သန်းသန်းဆိုးက လီးကိုဆွရင်းပြောလိုက်သည်…။ ဟင်းဟင်းး…လူဆိုးလေး….။ သန်းသန်းစိုးကား ပြောရင်းနဲ့ မောင်တင့်ရဲ့လည်ပင်းတွေ ရင်ဘတ်တွေကိုလျှာနဲ့ကစားပေးနေသည်။ စိတ်ကိုကြွသထက်ကြွအောင်လုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကြိုက်တယ်မဟုတ်လား…ဟင်းဟင်း…။ သန်းသန်းစိုးကပြောရင်းထလိုက်ကာ မောင်တင့်လီးပေါ်မှာ ခွထိုင်ကာ သူမစောက်ပတ်အမြောင်းနှင့် တေ့ကာ ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။၀ူးဝု..မောင်တင့်ခါးကိုကော့တက်လာသည်… ဒီကောင်လေးလီးအဖျားတွေကျင်ပြီးကောင်းနေအောင်သန်းသန်းစိုးလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သန်းသန်းစိုးက မောင်တင့်လီးချောင်းကိုကိုင်ပြီး စောက်ပတ်ဖြင့်တေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းဖိထိုင်ချလိုက်သည်။ မောင်တင့်က လူပျိုစစ်မှန်းသိသာသည်။ လီးချောင်းက အနညးငယ်ပင်ျပျာ့မနေဘဲ မာကျောနေသည်။
မောင်တင့်ရဲ့လီးချောင်းကြီးက သူမစောက်ခေါင်းထဲ တစ်ရစ်ချင်းဝင်ရောက်နေသည်။လီးကြီးက သူမရဲ့စောက်ပတ်အတွင်းသားနုတွေကိုပွတ်တိုက်ပြီး ဝင်ရောက်လာတာကိုက သူမအဖို့အရသာအရမ်းကိုရှိနေသည်။ လင်ရှိမယား သန်းသန်းစိုးကတော့ လူပျိုလေးမောင်တင့်ကိုလူပျိုရည်ဖျက်ခွင့်ရလိုက်ပြီလေ။ မောင်တင့်ကား မျက်လုံးကြီးများဝိုင်းလာသည်။သန်းသန်းစိုးက လီးတစ်ချောင်းလုံးကိုအဖုတ်ထဲ သွင်းကာစိမ်ထားပြီး စိတ်ပြေနပြေလှည့်နေသည်။ သူမကိုစွဲနေအောင် လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မောင်တင့်အနေနဲ့ကလည်း အသည်းခိုက်အောင်ကောင်းနေသည်။ ပြောရလျှင်မသန်းသန်းစိုးကိုအပီကိုဆောင့်လိုက်ချင်သည်။ ဒါပေမဲ့ သန်းသန်းစိုးက မောင်တင့်ကိုဒီအရသာကိုခံစားစေချင်၍ ကြိုးချည်ပြီး သူမ အကျဉ်းသားသဖွယ်ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်တော့သန်းသန်းစိုးက မောင်တင့်လီးကို အဖုတ်ထဲမှာ ဒစ်မြုပ်ရုံလောက်အထိ ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး မောက်တင့်ပါးစပ်မှတိပ်ကိုဆွဲခွာ လိုက်သည်။ ပါးစပ်ထဲမှအဝတ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ မောင်တင့်ကားစကားပြောလို့ရသွားချေပြီ။ မမ လုပ်ပေးပါတော့ကျွတ်တော့ကို သန်းသန်းစိုးပြုံးလိုက်သည်။ မောင်တင့်လီးကိုသူမအဖုတ်နှင့် ဒစ်မြုပ်ရုံသာလုပ်ထားပြီး ကစားနေသည်။ မောင်တင့်ကား မသန်းသန်းစိုးရဲ့ပညာပြမှုကိုကောင်းကောင်းခံနေရသည်။
အိုးအိုး အင်းအင်း မမ ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့ဘူး အအ မောင်တင့်ကား တစ်ကိုယ်လုံးတုန်နေပြီ။ ခစ်ခစ် ဒီလိုရမလား မောင်လေးရဲ့ ခစ်ခစ် မင်းမမကိုယူမှာလား မမစိုးမောင်ကိုကွာမှာ။ ယူယူမယ်မမ။ သန်းသန်းစိုးက လီးကိုအဖုတ်ထဲတစ်ဝက်မြုပ်အောင်ဖိထိုင်လိုက်ပြီး ။ အင်းဟင်း မမ အကုန်သွင်းပေးပါ။ ဒါဆို မင်းလေးကိုမမက ညတိုင်းကြိုးတုပ်ပြီး ဖိုက်မှာနော်။ အင်း ဟင်း မမ လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပါဗျာ။ ဟုတ်ပြီလေ။သန်းသန်းစိုးက လီးတစ်ဆုံးဖိထိုင်ချလိုက်တော့သည်။ စွပ်စွပ်ဒုတ်ဒုတ် ဘောက်ဘောက် မောင်တင့်ကား သန်းသန်းစိုးရဲ့ ရမ္မက်ကြောမှာမျှောချေပြီ။ ကုတင်ပင်တကျီကျီအသံတွေထွက်လာသည်။ လူပျိုစစ်စစ် စိုးမောင်ရဲ့လီးကို သန်းသန်းစိုး အပေါ်မှမြင်းစီးရင်း အရမ်းကိုအရသာတွေ့နေသည်။
ဖောက်ဖောက် စွပ်စွပ် အင်းအင်း သန်းသန်းစိုးရဲ့နို့နှစ်လုံးကား သူမလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူအပေါ်အောက်ခုန်နေသည်။ ဖားလျားချထားသောဆံပင်တွေကလဲ နို့ပေါ်မှာ ဝဲကျလှုပ်ရှားနေတာကိုကမောင်တင့်ကိုပိုရမ္မက်ကြွစေသည်။ ဘွတ်ဘွတ်စွပ်စွပ် သန်းသန်းစိုးမျက်နှာရှုံ့သွားသည်။တစ်ချီပြီးသွားသည်။မောင်တင့်လဲဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ တစ်ချီပြီးသွားသည်။ သန်းသန်းစိုးကမောင်တင့်ပါးစပ်ကိုအဝတ်နဲ့ပြန်ဆို့ကာ တိပ်နဲ့ပြန်ပိတ်ပေးလိုကိပါတယ်။ လူပျိုလေးမောင်တင့်ကို ကုတင်မှာတစ်ညလုံးကြိုးနဲ့ချည်ထားပြီး စိုးမောင်မိန်းမသန်းသန်းစိုးကတော့ တစ်ညလုံးတစ်ချီပြီး တစ်ချီမိုးလင်းပေါက်စိတ်ကြိုက်ကိုဆွဲတော့တာပါဘဲ။ နောက်ဆုံးမောင်တင့်လီးဒစ်ပြုတ်တဲ့အထိပါဘဲ။
ဟာ…စိုးမောင်ကား အ၀တ်ဝတ်ချိန်ပင်မရလိုက်။ သူကရိုစီခင်အပေါ်တက်ပြီးပယ်ပယ်နယ်နယ်ဘွတ်နေသောအချိန်။ သူ့လီးကရိုစီခင်အဖုတ်မှာ တပ်လျှက်သားကြီးရှိနေစဉ် ရပ်ကွက်လူကြီးများဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုစိုးမောင်…ရှင့်ကိုရှင်လည်လှပြီမှတ်နေပြီပေါ့…ဟုတ်လား သန်းသန်းစိုး…ကိုယ်ရှင်းပြပါရစေဦး….။ ရှင်းမနေနဲ့…ရှင်ခြေရှုပ်နေတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်မသိနေတာကြာပြီ လက်ပူးလက်ကျပ်မမိသေးလို့…စောင့်ကြည့်နေတာရှင်းလား..။ရှင့်ကို တရားစွဲမယ်…ထောင်ချမယ်…ဟင်း။ ရိုစီခင်ကတော့ အခန်းထောင့်မှာ တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေသည်။ သန်းသန်းစိုးက အပိုင်ကိုကိုင်ထားခြင်းဖြစ်သဖြင့် စိုးမောင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့။ ခေါင်းကြီးငုံ့နေရသည်။
သက်သေများထင်ရှားသဖြင့် မယားရှိလျှက်နှင့်နောက်မယားယူထားသော စိုးမောင်ကား သန်းသန်းစိုးကိုကွာပေးလိုက်ရသည်။ စိုးမောင်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကို သန်းသန်းစိုးက အကုန်သိမ်းပြီးထောင်ထဲပို့လိုက်သည်။တကယ်တော့ ထိုအစီအစဉ်ကား သန်းသန်းစိုးရဲ့စနစ်တကျစီစဉ်မှုတွေမှန်း စိုးမောင်မသိလိုက်။ ရိုစီခင်ကား ယခင်ကလည်း အပျက်မလုပ်စားဖူးသူပီပီ ငွေမျက်နှာတစ်ခုတည်းသာကြည့်သည်။ သန်းသန်းစိုးက ရိုစီခင်နှင့်တိတ်တဆိတ်သွားပြီးကြေးညှိလိုက်သည်။ ရိုစီခင်လုပ်ချင်သော အလုပ်တစ်ခုလုပ်နိုင်အောင် အရင်းအနှီးတစ်ခုနှင့် စိုးမောင်ပိုင်ဆိုင်သော တိုက်ခန်းကို ရိုစီခင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် လုပ်ပေးလိုက်ရုံဖြင့် စိုးမောင်ကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်နိုင်တော့သည်။
စိုးမောင်ကို ထောင်ထဲပို့ပြီး တစ်လလောက်တော့ သန်းသန်းစိုးဟန်မပျက်နေလိုက်သေးသည်။ နောက်တော့ ပိုင်ဆိုင်သမျှရောင်းချပြီး နယ်စပ်ဒေသတစ်ခုသို့ပြောင်းနေလိုက်သည်။ မောင်တင့်ကို ယူလိုက်ပြီး သူမနှင့်အတူခေါ်သွားတော့သည်။ သန်းသန်းစိုးအနေနဲ့ကတော့ ဖောက်ပြန်နေသော ယောင်္ကျားဖြစ်သူစိုးမောင်ကို ပညာပေးလိုက်ရသည့်အပြင် မောင့်တင့်လိုလူပျိုလေးကို လင်တော်လိုက်ရသဖြင့် အတန်ကြီးတန်သွားလေတော့သည်။ ပြီးပါပြီ